Wednesday June 13, 2018 - 17:07:31 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya galbeedka Yemen ayaa sheegaya in ay sii xoogeysteen dagaallada lagu doonayo in maleeshiyaadka xuuthiyiinta looga fara maroojiyo magaalada dekadda leh ee Alxudeydah.
Ilo wareedyo melleteri ayaa sheegaya in dagaallada ugu culus ay ka dhaceen maalmihii Talaadada iyo Arbaco kadib markii ciidamo taageersan xukuumadda Cabdi Rabbi Haadi Mansuur oo dhanka cirka ay ka taageerayaan isbaheysiga carabta ay ujiheysteen dhanka malaagadala xudeyda oo ah meesha ugu badan oo ay kasoo degaan badeecadaha ganacsi ee wadanka Yemen laga isticmaalo.
Dagaalka ugu culus wuxuu ka socdaa mandiqadda Aldureyhim oo qiyaastii 30 KM ujira magaalada Alxudeyda, ciidamo isugu jira kuwa lugta iyo kuwa cirka dowladda imaaraatka carabta ayaa ka qeyb qaadanaya dagaalka, sidoo kale furin dagaal oo cusub ayay taxaalufka carabta uga fureen maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee maamulaya magaalada alxudeyda, goob joogayaal ayaa warbaahinta usheegay in ciidamada huwanta ah ay markii ugu horraysay gaareen mandiqadda beytul faqbah oo qiyaastii 10KM ujirta magaalada xideydah.
Warbixin kasoo baxday waxa loogu yeero Q.Midoobe ayaa looga digay in musiibo bani'aadannimo ay ka dhacdo magaalada xudeydah haddii isbaheysiga carabta ay magaalada xoog ku qabsadaan, ilo wareedyo siyaasadeed ayaa sheegaya in diblumaasi katirsan Q.midoobe uu wado wadahadallo xuuthiyiinta lagu qancinayo in ay si nabad gelya ah ku wareejiyaan magaalada.
Alxudeydah waa magaalo istiraatiiji ah oo galbeedka Yemen dhacda tan iyo markii ay dagaalladu ka qarxeen wadanka sanaddii 2014 waxay aheyd meesha kaliya ee lagasoo dajiyo cuntada daruuriga ah waxaana kuyaal dekad caalami ah waana magaalo ku teedsan badda cas.
Nolosha magaaladan waxaa ku xiran dad gaaraya 8 milyan oo qof kuwaas oo kunool gobollada ku dhow dhow xudeyda.
Warar horay usoo baxay ayaa sheegayay in ciidamo American ah ay taxaalufka Carbeed ku caawinayaan sidii ay magaaladan muhiimka ah uga fara maroojin lahaayeen Taageerayaasha iiraan ee wadanka Yemen.